(၂၀၀၂) မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ
Executive Summary - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ...
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿ...
Nay Thiha, Founder and CEO at San
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖွ ့ဖုိးရး ကာင်စီ ့် မန္တ လး မို့တာ်စည်ပင်သာယာ ရးဥပ ဒ (နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိးရး ကာင်စီ ဥပ ဒအမှတ် ၈/၂၀၀၂) ၁၃၆၄ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၀၂ ခနှစ်၊ နိ၀င်ဘာလ ၁၄ ရက်) နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည် အာက်ပါဥပ ဒကိြပ ာန်းလိက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နငအဓိပာယ် ဖာ်ြပချက်ှ့် ္ပ၁။ ဤဥပ ဒကိ မန္တ လး မို့တာ်စည်ပင်သာယာ ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည် - (က) မို့တာ်နယ်နမိတ် ဆိသည်မှာ မန္တ လး မို့တာ် စည်ပင်သာယာ ရး နယ်နမိတ်ကိ ဆိလိသည်။ (ခ) ကာ်မတီ ဆိသည်မာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ မန္တ လး မို့တာ်ှစည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီကိ ဆိလိသည်။ (ဂ) ရးအ ကီးအကဲ ဆိသည်မှာ မန္တ လး မို့တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီရး ၏ ၀န်ထမ်းအ ကီးအကဲကိ ဆိလိသည်။ 78 2.
အခန်း (၂) ဖွဲ ့စည်းြခင်း၃။ မန္တ လး မို့တာ်၏ စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက် နိင်ရန် နိင်င တာ်၀န် ကီးချူပ်သည်- (က) ကာ်မတီကိ အဖွဲ ့၀င်အနည်းဆးငါးဦး၊ အများဆး ကိးဦးြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။ (ခ) ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားများြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ရမည်။ (ဂ) ကာ်မတီ၏ ဥကဌနှင့် အတွင်း ရးမှူးတိ ့ကိ တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။ ္က လိအပ်ပါက ဒတိယ ဥကဌကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ ္က၄။ ကာ်မတီဧ်။ ဥကဌသည် မို့တာ်၀န်ြဖစ်သည်။ ဒတိယဥကဌကိ သတ်မှတ်ပါက ္က ္ကဒတိယဥက္က ဌသည် ဒတိယ မို့တာ်၀န် ြဖစ်သည်။၅။ ရးအ ကီးအကဲသည် ကာ်မတီ၏ တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး ြဖစ်သည်။၆။ ကာ်မတီသည် နိင်င တာ်၀န် ကီးချူပ်အား တိက်ရိက်တာ၀န်ခရမည်။၇။ ကာ်မတီသည် ကိင်ပိင်အမည်၊ တဆိပ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင ၊့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင ၊့် တရားစွဲဆိနိင်ခွင နှင့် တရားစွဲခနိင်ခင ့် ရှိ စရမည်။ ့်ွအခန်း (၃) ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ၈။ ကာ်မတီသည် မို ့ဘ တာ်နယ်နမိတ်အတွင်း အာက်ပါလပ်ငန်းတာ၀န်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူချမှတ်ြခင်း၊ လမ်းညန်မ ပးြခင်း၊ ကီး ကပ်ကွပကြဲ ခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ််ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုရမည် - (က) မို ့ြပစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်း၊ မို ့သစ်များ တည် ထာင်ြခင်း၊ (ခ) ြမများကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ စီမခနခွဲြခင်း၊ ့် 79 3.
(ဂ) အ ဆာက်အအများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမးြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်း်ြခင်း၊(ဃ) ကျူး ကျာ်အိမ်များ၊ ကျူး ကျာ်အ ဆာက်အများ၊ ကျူး ကျာ်ရပ်ကွက်များ ဖျက်သိမ်းြခင်းနှင့် ြပာင်း ရွ့နရာချထားြခင်း၊(င) လမ်းများ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတားများ တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် ယင်းတိ ့ကိ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊(စ) ယာဉ်နှင့်အ နှးယာဉ်များ သွားလာြခင်း၊ ရပ်နားြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊(ဆ) လမ်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းအသးချမ သတ်မှတ်ြခင်း၊ လမ်းအမည် သတ်မတ်ှြခင်းနှင့် အ ဆာက်အအအမှတ် သတ်မှတ်ြခင်း၊(ဇ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ်(စျ) ပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်းြခ၊ ကစားကွင်း၊ အပန်း ြဖ နရာများ တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊(ည) လမ်းမီး ပး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊(ဋ) ရ ပး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊(ဌ) သနရှင်း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ့်(ဍ) ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊(ဎ) စျးများတည် ဆာက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် စီမခနခွဲြခင်း၊ ့်(ဏ) အစားအ သာက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ၊ စား သာက်ဆိင်များ၊ လမ်း ဘး စျး ဆိင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊(တ) ြပည်တွင်းခရီးသည်များသာ တည်းခိမည့် တည်းခိခန်းများ ဖွင လှစ်ခွင ြပု ့် ့် ြခင်းနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စမျာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာနှင့် တည်:ခိခန်:မျာ:အာ: စစ် ဆ:ြခင်:၊(ထ) ကူးတိ ့လပ်ငန်းများ၊ ပွဲရလပ်ငန်းများနှင့် ပဂ္ဂလိက အ ပါင်ဆိင်လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင ြပုြခင်းနှင့် စီမခနခွဲြခင်း၊ ့် ့် 80 4.
(ဒ) သားသတ်ရများ တည် ထာင်ြခင်း၊ စားသးရန် တိရ စ္ဆာန်များ သတ်ြဖတ်ခွင ့် ြပုြခင်း၊ (ဓ) က ၊ နွားပွဲ စျးများ တည် ထာင်ြခင်းနှင့် စီမခနခွဲြခင်း၊ဲ့် (န) တိရ စ္ဆာန်များထားရှိြခင်း၊ မွးြမူြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွင ြပုြခင်း၊ ့် လလွင သွားလာ န သာ တိရ စ္ဆာန်များကိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ့် (ပ) လလွင သွားလာ န သာ ့် ရူးသွပ်သူ၊ အနာ ကီး ရာဂါ စွဲကပ်သူနှင့် တာင်းရမ်းစား သာက်သူများကိ ထိနးသိမ်း စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ်ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဖ) မီး ဘး၊ ရ ဘး၊ လ ဘး၊ သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဗ) သသာန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ သ ဂုဟ်ြခင်း၊ သ ဂုလ်စက်များ တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် စီမခနခွဲြခင်း၊ ့် (ဘ) အများြပည်သူ ့အကျိုးြပု အြခားစည်ပင်သာယာ ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ြခင်း၊ (မ) နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်က အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာ၀န် များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။၉။ ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၈ ပါစည်ပင်သာယာ ရး လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် မူဝါဒသ ဘာပါရှိ သာ လပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း၊ မို့တာ်နယ်နမိတ်အတွင်း ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အထူးစီမိကိန်းများကိလည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်၏သ ဘာတူညီချက်ရရှိ ပီးမှ ဆာင်ရွက်ရမည်။၁၀။ ကာ်မတီသည် မိမိလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်ပါကသက်ဆင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ိ81 5.
အခန်း (၄) ကာ်မတီ၏ လပ်ပင်ခင များိွ ့်၁၁။ ကာ်မတီ၏ လပ်ပိင်ခွင များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - ့် (က) မို့တာ်နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ (ခ) ကာ်မတီပိင် ရန်ပ ငွြဖင့် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဂ) စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိင် သာ အခွန်အခများနှင့် အခွန်နန်းထားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ စည်း ကပ်ြခင်း နှင့် ကာက်ခြခင်း၊ (ဃ) ကာ်မတီပိင်အ ဆာက်အအနှင့် ြမများကိ ငှားရမ်းြခင်း၊ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ် ဖာက်ဖျက် သာ အငှားယူသူများကိ ဖယ်ရှားနှင်ထတ်ြခင်း၊ (င) အ ဆာက်အအနှင့် ြမငှားရမ်းခများ၊ အြခားနည်းြဖင့် ရရှိသည့် ငွများကိ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စည်ပင်သာယာ ရး လပ်ငန်းများအတွက် သးစွဲြခင်း၊ (စ) ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တိ ့နှင့်ဆက်သွယ်၍ စည်ပင် သာယာ ရးကိ အ ထာက်အကူြပု သာ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဆ) အစိးရထမှြဖစ် စ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ ့အစည်းများထမှြဖစ် စ ချး ငွ ရယူြခင်း၊ အ ထာက်အပ့များရယူြခင်း၊ (ဇ) စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းအလိက် လိအပ် သာ ဆပ် ကာ်မတီများ ဖွဲ ့စည်း ၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စျ) စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်များကိ ပိမိထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ခတ်မီတိးတက်သည့် နည်းပညာများြဖင့် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ည) နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်က အခါအား လျာ်စွာ အပ်နှင်းသည့် လပ်ပိင်ခွင များကိ ့် ကျင သးြခင်း။ ့် 82 6.
အခန်း (၅) ဘာရး၁၂။ ကာ်မတီသည် မိမရန်ပ ငွြဖင့် ရပ်တည်ရမည်။ ထိ ့ြပင် မိမိ၏ဘိာ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိလည်း တာ၀န်ယရမည်။ ူ၁၃။ ကာ်မတီသည် မိမိရန်ပ ငွကိ သီးြခားဘဏ်စာရင်းဖွင လှစ်ထားရှိ၍ စည်ပင်သာယာ ့် ရးလပ်ငန်းများအတွက် သးစွဲပိင်ခွင ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင် အများြပည်သူအကျိုးအတွက် ့်အမှန်သးစွဲရန် လိအပ်ပါက မို့တာ်နယ်နမနြ် ပင်ပရှိ လပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခခအတွက် သးစွဲနိင်ိိသည်။၁၄။ ကာ်မတီသည် လတ်တ လာအသးြပုရန် မလိအပ်သည့် ရန်ပ ငွကိ တိးပွား စရန်သင့် လျာ်သလိ စီစဉ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။၁၅။ ကာ်မတီသည် ရရှိ သာ နိင်ငြခား ငွကိ သီးြခားဘဏ်စာရင်းဖွင လှစ်ထားရှိ၍ ့်လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများအတွက် သးစွဲနိင်သည်။၁၆။ ကာ်မတီသည် - (က) ရးအ ကီးအကဲက ရးဆွဲတင်ြပ သာ နှစ်စဉ်ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းကိ စိစစ် ပီး နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်ထတင်ြပ၍ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ (ခ) နှစ်စဉ်မိမိ၏ ဘာရးအ ြခအ နနှင့် စာရင်းစစ် ဆး တွ ့ရှိချက်တိ ့ကိ ဘာရးနှစ်ကန်ဆး ပီး ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ် ထသိ့တင်ြပရမည်။ 83 7.
အခန်း (၆) ၀န်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပ၁၇။ ကာ်မတီသည် လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ အ ြခခလျက် လိအပ် သာ ၀န်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပကိ နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရးဆွဲထားရှိရမည်။၁၈။ ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၁၇ အရ ၀န်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပကိ ရးဆွဲထားရာတွင်စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများကိ အ ထာက်အကူြပုသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ၀န်ထမ်းများကိလည်း သက်ဆင်ရာ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း၍ ဖွဲ ့စည်းပတွင် ိထည့်သွင်းနိင်သည် - (က) ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ် ရးနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် သာ၀န်ထမ်းများ၊ (ခ) မီး ဘး ကိုတင်ကာကွယ် ရး လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက် သာ ၀န်ထမ်းများ၊ (ဂ) လြခု ရးနှင့် စည်းကမ်းထိနးသိမ်းသည့် လပ်ငန်းတာ၀န်ကိ ဆာင်ရွက် သာ်စည်ပင်သာယာ ရး ရဲတပ်ဖွဲ ့၀င်များနှင့် အြခား၀န်ထမ်းများ။၁၉။ ကာ်မတီသည် ၀န်ထမ်းများ ခနထားရာတွင် - ့် (က) တည်ဆဲ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဖွဲ ့စည်းပအတွင်း ခနထား ့် ပိင်ခွင ရှိသည်။ ့် (ခ) စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ၀န်ထမ်းများကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း၍ လဲ ြပာင်းရယူ ခနထားနိင်သည်။ ့်၂၀။ ကာ်မတီသည် ၀န်ထမ်းများခနထားရာတွင် ့် နှစ်စဉ်ရရှိ သာ ၀င် ငွ၏ ၃၀ရာခိင်နန်းထက် ကျာ်လွန်၍ သးစွဲြခင်း မြပုရ။၂၁။ ကာ်မတီသည် ၀န်ထမ်းများကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲနိင်ရန်အလိ ့ငှာ ၀န်ထမ်း ရးရာလပ်ပိင်ခွင များကိ ရးအ ကီးအကဲအား လိအပ်သလိ လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ ့် 84 8.
အခန်း (၇) ရန်ပ ငွထနးသိမးြခင်း၊ စာရင်းစစ် ဆးြခင်းိ် ်၂၂။ ကာ်မတီသည် ရးအ ကီးအကဲက စာရင်းများကိ နည်းလမ်းတကျထိန်းသိမ်းထားရှိနိင်ရန်နှင့် စစ် ဆးြခင်းြပုနိင်ရန်အလိ ့ငှာ ငွစာရင်းလပ်ထးလပ်နည်းများကိ စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့်ညိနင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။၂၃။ ရးအ ကီးအကဲသည် - (က) ကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားရှိသည့် ငွစာရင်းလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စာရင်းများ ြပုစထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ (ခ) ပဒ်မခွဲ(က) ြပုစထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် စာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်း စစ်ချုပ်က တာ၀န် ပးအပ်သူ၏ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။ အခန်း (၈) ြပစ်မနှငြ့် ပစ်ဒဏ်များ၂၄။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မတီက ထတ်ြပန်သည် နည်းဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း သိ ့မဟတ် လိက်နာရန် ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတရမည်။ ်၂၅။ ပဒ်မ ၂၄ အရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခရသူသည် အဆိပါနည်းဥပ ဒကိ ဆက်လက်၍ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်လ င် သိ ့မဟတ် လိက်နာရန် ပျက်ကွက်လ င် ထိသူကိ ဆက်လက် ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်ြခင်းြပုသည့် န့အသီးသီးအတွက် တစ် န ့လ င် အနည်းဆး ငွဒဏ် ကျပ် ၅၀၀ မှ အများဆး ငွဒဏ် ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ ချမှတ်မည်။၂၆။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မတီက ထတ်ြပန်သည့် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ အမိနတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ ့် ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း သိ ့မဟတ် လိက်နာရန် 85 9.
ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ်သးလအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် ချမှတ်ရမည်။၂၇။ ပဒ်မ ၂၆ အရ ြပစ်ဒစ်ချမှတ်ြခင်းခရသူသည် အဆိပါ စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ အမိနတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ ဆက်လက်၍ ့် ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်လ င် သိ ့မဟတ်လိက်နာရန် ပျက်ကွက်လ င် ထိသူကိ ဆက်လက်၍ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ြခင်း သိ ့မဟတ်ပျက်ကွက်ြခင်းြပုသည့် န ့အသီးသီးအတွက် တစ် န ့လ င် အနည်းဆး ငွဒဏ် ကျပ် ၂၀၀ မှအများဆး ငွဒဏ် ကျပ် ၂၀၀၀ အထိ ချမှတ်ရမည်။ အခန်း (၉) အ ထွ ထွ၂၈။ ကာ်မတီသည် မန္တ လး မို ့စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီပိင် ရန်ပ ငွများ၊ ရ့ြပာင်း နိင် သာပစ္စည်းများသည် မ ရ့ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများ၊ ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းများနှင့် ဆာင်ရွက် ပီးလပ်ငန်းများ၊ ရရန်ပိင်ခွင နှင့် ပးရန်တာ၀န်များကိ ဆက်ခ ့်ရမည်။၂၉။ ကာ်မတီသည် ရပ်သိမ်း ပီးြဖစ် သာ စည်ပင်သာယာ ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒအရထတ်ြပန်ထားသည့် မန္တ လး မို ့စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းများ၊အမိနများနှင့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာများကိ ဤဥပ ဒနှင့် မဆနကျင်သ ရ့ကျင သးနိင်သည်။ ့် ့် ့်၃၀။ ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိသည့် မခင်းများကိ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် စစ် ဆး စီရင်နင် ိရန်အလိ ့ငှာ မို့တာ်နယ်နမိတ်အတွင်းိသင့် လျာ်သည့် နရာများတွင် တရားရးများဖွင လှစ်ထားရှိနိင် ရးအတွက် ကာ်မတီသည် တရားရးချုပ်နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ ့်၃၁။ (က) မို့တာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မ ရ ့မ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းလဲ ြပာင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆိရာတွင် အခွန်တဆိပ် ခါင်းထမ်း ဆာင်ရမည့် ပဂ္ဂိုလ်သည် ြမန်မာနိင်ငတဆိပ် ခါင်းအက်ဥပ ဒအရ ထမ်း ဆာင်ရသည့် 86 10.
အခွန်တဆိပ် ခါင်းတန်ဖိးအြပင် ၂ ရာခိင်နန်းကိ တိးြမင့်၍ ထမ်း ဆာင် ရမည်။ (ခ) ကာ်မတီသည် ပဒ်မခွဲ(က)အရ တိးြမင့်ထမ်း ဆာင်သည့် အခွန်တဆိပ် ခါင်းတန်ဖိးကိ လဲ ြပာင်းရယူ ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘာရးနှင့် အခွန် ၀န် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။၃၂။ ကာ်မတီသည် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် - (က) လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများကိ နိင်င တာ်၀န် ကီးချုပ်၏ သ ဘာတူညီချက် ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ (ခ) လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာများ၊ အမိနများနှင့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ ့်၃၃။ မန္တ လး မိုစည်ပင်သာယာ ရးဥပ ဒ (ဥပ ဒအမှတ် ၁၀/၉၂)ကိ ဤဥပ ဒြဖင့်ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ (ပ) သန်း ရ ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး ဥက္က နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 87 Recommended